एट्लेटिकोविरुद्ध युभेन्टसको अग्निपरीक्षा, रोनाल्डोको कारण टिमको स्कोरिङमा समस्या आउन सक्ने ! – sagunkhabar.com
एट्लेटिकोविरुद्ध युभेन्टसको अग्निपरीक्षा, रोनाल्डोको कारण टिमको स्कोरिङमा समस्या आउन सक्ने !
एजेन्सी – यूईएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलको प्रि–क्वाटरफाइनलमा आज राति इटालियन महारथी युभेन्टसले आज राति स्पेनिस क्लब एट्लटिको मड्रिडको सामना गर्दैछ । खेल नेपाली समयअनुसार आजराति १ः४५ बजे युभेन्टसको घरेलु मैदान आलियान्ज एरिना टुरिनमा हुँदैछ ।
पहिलो लेगमा खराब प्रदर्शन गरेको युभेन्टस दोस्रो लेगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै क्वाटरफाइनलमा पुग्ने लक्ष्यमा घरेलु टोली मैदान उत्रने छ । युभेन्टस पहिलो लेगमा २–० ले पराजित भएको थियो । उक्त खेलमा एट्लेटिकोका जोसे गिमिनेज र डिएगो गोडिनले गोल गरेका थिए ।
च्याम्पियन्स लिगको पछिल्ला तीन खेलमा जित हात पार्न नसकेको युभेन्टस एट्लेटिकोलाई पराजित गर्ने योजनामा हुनेछ । युभेन्टससँग सुपरस्टार फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पाउलो डिब्याला, मारियो म्यान्जुकिकजस्ता खेलाडीहरुले कुनैपनि बेला खेल परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन् । तर, फरवार्ड रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिगको पछिल्लो ६ खेलमा एक गोल मात्र गर्न सफल हुदा टिमको स्कोरिङमा समस्या आउने देखिएको छ ।
यता, स्पेनिस क्लब एट्लेटिको मड्रिड पहिलो लेगमा बनाएको अग्रतालाई जोगाउदै अघि बढ्ने योजनामा हुनेछ । डिएगो सिमोनीको नेतृत्वमा एट्लेटिकोले अहिलेसम्म इटालियन क्लबसँग हार बेहोरेको छैन ।
दीपक मनाङेको अर्को ‘छलाङ’ : मनाङे बने गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समिति सदस्य
मेजर साहबको कर्तुत : गुप्तांग देखाउँदै भाडामा बस्ने महिला माथि एकाबिहानै यस्तो हर्कत !
नेपाली फुटबलर रोहित चन्दको कमाई १० लाख !!
फ्रान्सेली लिग : फेरी चुके पेनाल्टीमा एमबाप्पे
मेस्सीको ला लिगामा ३३ औं ह्याट्रिक, बार्सिलोनाको फराकिलो जित